For MIET post graduate students ...: အဆင့် (၃) Совет အဖွဲ့သို့ Заявление နှင့် Заключение တင်ခြင်း
အဆင့် (၃) Совет အဖွဲ့သို့ Заявление နှင့် Заключение တင်ခြင်း
၁) Заявление တင်ခြင်း
အဆင့် (၂) တွင် Нина Григорьевна Максименко အား စာရွတ်စာတမ်းများတင်ပြီးပါက Нина Г.М. မှ Заявление အား ပြန်ပေးပြီး မိမိ Совет ၏ Председатель ထံသိုသွားပြခိုင်းပါမည်။ မိမိ၏ Специальность ဘယ် Совет (Д212.134.01, Д212.134.02 စသဖြင့်)တွင်ပါဝင်ပြီး မိမိ Совет ၏ Председатель ဘယ်သူဖြစ်သည်ကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Совет ၏ Председатель မှ စာတမ်းအား စစ်ရန် Председатель နှင့် Член နှစ်ဦးပါဝင်သော Комиссия အဖွဲ့ငယ်တစ်ခုကိုဖွဲ့ပြီး မိမိ၏ Заявление ပေါ်တွင် ထိုသုံးဦးအမည်အားရေးပေးပါမည် (နမူနာအား ဒီမှာကြည့် နိုင်ပါသည်)။ ဌင်းနောက် ထိုသုံးဦးအမည်ရေးပေးထားသော Заявление ကို 1-ой корпус မှ ရုံးခန်းနံပါတ် 1223 (ရုံးခန်းဖွင့်ချိန် 09:00-17:00, နားချိန် - 12:00-13:30) မှာရှိတဲ့ Нина Григорьевна Максименко အား ပြန်ပေးရပါမည်။ Нина Г.М. မှ ထို Заявление အားကော်ပီဆွဲပြီး မူရင်းကို သူယူထားပြီး ကော်ပီကို မိမိအားပြန်ပေးပါမည်။
၂) Заключение တင်ခြင်း
Заключение နမူနာပုံစံအား ဒီမှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ သတိပြုရမှာကတော့ Заключение ပေါ်မှာ လက်မှတ်ထိုးရမယ့် သုံးဦးမှာ Заявление ပေါ်မှာ ရေးပေးလိုက်တဲ့ သူတွေ ဖြစ်ရမှာပါ။ ထို Заключение နဲ့အတူ Заявление ကော်ပီအားယူ၍ ထိုကော်ပီပေါ်ရှိ သုံးဦးထံသို့သွားပြရမှာပါ (ဒီနေရာမှာ principle အရဆိုပါက Заключение နဲ့ Заключение အပြင် ပရင့်ထုတ်ထားတဲ့ Диссертация နဲ့ ပရင့်ထုတ်ထားတဲ့ автореферат ပါပြရမှာပါ။ Supervisor ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယူပါ)။ ထိုသုံးဦးမှ Заключение ပေါ်တွင်လက်မှတ်ထိုးပေးပြီးပါက 1-ой корпус မှ 1223 (ရုံးခန်းဖွင့်ချိန် 09:00-17:00, နားချိန် - 12:00-13:30) မှာရှိတဲ့ Нина Григорьевна Максименко အား ထို Заключение ကိုတင်လို့ရပါပြီ။
စာရွတ်စာတမ်းများစုံပြီဖြစ်၍ Нина Г.М. မှ Заседание တွင် ဆက်လက်တင်ပေးပါလိမ့်မည်။ Заседание မှာ ပုံမှန်အားဖြင့် နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်လုပ်လေ့ရှိသဖြင့် မိမိအားစောင့်ခိုင်းပါမည်။ Заседание ပြီးပါကဆက်လုပ် စရာ ရှိသည်များကိုဆက်လက်ဖို့ မိမိဌာန (သို့) မိမိအား လှမ်းအကြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအပိုင်း ကိုတော့ အဆင့် (၄) မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်း ПРЕСЕДАТЕЛЮ ဖြစ်နေတယ် ... ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ဖြစ်ရမှာ ...
ဟုတ်တယ် သူငယ်ချင်း ... ကျေးဇူး .. ညီငယ်များ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ဟုပြောင်းရေးပါ။ Заявление နမူနာပုံစံမှ ပထမဆုံးစာကြောင်း၏ အမှားပြင်ဆင်ချက်ပါ။
Список рассылки နမူနာပုံစံများ
Опонент များနှင့် Организация များအတွက် Letter နမူ...
အဆင့် (၃) Совет အဖွဲ့သို့ Заявление နှင့် Заключен...